တရုတ်နိုင်ငံ သန့်စင်စွမ်းအင်သုံးကုမ္ပဏီက ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုထောက်ပံ့ပေး - Xinhua News Agency
ဆော်ပိုလို၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မျိုးဆက်လမ်းကြောင်း နှင့် ယင်းကဲ့သို့သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို နိုင်ငံအတွင်းအသုံးပြုမှုသည် ရေရှည်တည်တံ့သည့် အနာဂတ် သို့ ဦးတည်သည့် မှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံးဓါတ်ခဲများနှင့် လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Build Your Dreams (BYD) ကုမ္ပဏီက ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက် ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့တွေက ဘရာဇီးနိုင်ငံ မှာ ဒီလိုထုတ်ကုန်တွေမရှိချိန်ကတည်းက လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားတွေကို တင်ပို့ခဲ့တာပါ” ဟု BYD ၏ ဘရာဇီး နိုင်ငံလုပ်ငန်းခွဲမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ Li Tie က ဘရာဇီးနိုင်ငံသို့ BYD ကုမ္ပဏီစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရှေ့မြောက်ပိုင်း မြို့များဖြစ်သည့် Recife မှ တောင်ပိုင်း Porto Alegre မြို့အထိ BYD ကုမ္ပဏီက တရုတ်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများကို တင်သွင်းပြီးဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ အဓိက မြို့ကြီးများတွင်ပြေးဆွဲခဲ့ရာ ဒေသတွင်း ဘတ်စ်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများသို့ BYD မှ ပေးပို့သောလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများမှာ “ခေတ်မီသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ရုံ သာမက “နည်းပညာများကိုလည်း မျှဝေယူဆောင်နိုင်ကြောင်း” ပြသရာရောက်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်မှစတင်ကာ BYD ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် ထုတ်ကုန် များ ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ ဆော်ပိုလိုမြို့တွင် BYD ၏ ပထမဆုံးရုံးခန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ၏ အပိုပစ္စည်းများ နှင့် လီသီယံအိုင်ယွန်း ဖဲရပ်ဖော့စဖရိတ်ဘတ်ထရီများ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကို ဆော်ပိုလိုရှိ Campinas တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ၏ ဝင်ရိုး/ကိုယ်ထည်နှင့်ဆိုလာပြားများထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများကို Campinas တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘတ်ထရီထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုကို အမေဇုံရှိ manaus တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ကိုယ်ထည်/ဝင်ရိုးများသည် BYD ၏ ပင်မ နည်းပညာဖြစ်ပြီး မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဂီယာအုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဘရိတ်စနစ်ကဲ့သို့သောအဓိက လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်ဟု လီက ဆိုသည်။ လျှပ်စစ်ကိုယ်ထည်/ဝင်ရိုးတစ်ခုသည် ဓါတ်ခဲများ၊ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် BYD ၏ ဆန်းသစ်သည့်နည်းပညာများကို ဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ လမ်းများသည်တရုတ်နိုင်ငံမှ လမ်းများနှင့်အနေအထားချင်းကွဲပြားလျှက်ရှိရာ အစောပိုင်းထုတ်လုပ်သည့်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများမှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိလမ်းများတွင်မောင်းနှင်ရာ၌ အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းရန် BYD ဘရာဇီးက နည်းပညာပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို မွမ်းမံခဲ့ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုပုံစံတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည့်အပြင် ဘရာဇီးဈေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။
အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းတွင် BYD ဘရာဇီးကုမ္ပဏီမှ အထူးလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား ၁၂ စင်းကို အမြန်ဆုံးအဝေးပြေးလမ်း၌မောင်းနှင်အသုံးပြုရန် ဆော်ပိုလိုရှိ Sao Jose dos Campos မြူနီစပယ်ဒေသသို့ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုဘတ်စ်ကားများတွင် နောက်ဆုံးပေါ် biosafe နည်းပညာ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်ထိုင်ခုံများ၊ USB အားသွင်းပေါက်များနှင့် ရုပ်သံမှန်ချပ်များထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ အစိုးရ က ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အပေါ်အလေးထားမှုသည် BYD ကုမ္ပဏီ၏ ဈေးကွက်ယုံကြည်မှုနှင့်ကတိကဝတ်ကို တိုးမြှင့်စေခဲ့သည်။
BYD ကုမ္ပဏီက လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ နှင့်ဆိုလာစွမ်းအင်မျိုးဆက်၌ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ထိပ်တန်းမှ မြှင့်တင်ပေးသည့်ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အဆိုပါနည်းပညာများကို ဒေသခံအစိုးရက ထောက်ပံ့အားပေးလျက်ရှိကြောင်းလီကဆိုသည်။ BYD ကုမ္ပဏီက ဟိုက်ဘရစ်ကားများ နှင့် လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးကုမ္ပဏီများကို သန့်စင်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဓါတ်ခဲများထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ တွင်ထိပ်တန်းမှဦးဆောင်နေသည်။
BYD ကုမ္ပဏီက တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာများ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာ ရာနှုန်းပြည့် ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းပြန်လည်အသုံးချရန်၊ အသိဉာဏ်နှင့်နည်းပညာများဖလှယ်ခြင်းသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက် ထိုနည်းပညာများကိုအသုံးချရန်လေ့လာနိုင်မည့် အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်နေသည့် BYD ဘရာဇီး၏ institutional ညွှန်ကြားရေးမှူးMarcello Von Schneider က ဆိုသည်။
ရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းအင်များထောက်ပံ့သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် BYD အနေဖြင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်လိုပြီး ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုသုညရာနှုန်းဖြစ်သည့် ခေတ်မီ ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးလိုကြောင်း ဘရာဇီးလူမျိုးအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ၏ အဓိက ဈေးကွက်များထဲတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် သန့်စင်သောစွမ်းအင်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအပြောင်းအလဲတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ၎င်းက ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
“ဘရာဇီးနိုင်ငံက ဒီပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကနဦးခြေလှမ်းစတင်သူနှင့် ဦးဆောင်သူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်” “မြို့တွေဟာ လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား နှင့် မီးခို့ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကင်းမဲ့တဲ့ အကျိုးရလဒ်များရရှိနိုင်မှာပါ” ဟု Von Schneider က ဆိုသည်။
BYD ဘရာဇီးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်းသို့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး ခရီးသည်တင်ကားမော်ဒယ်အသစ်အချို့ကို သယ်ဆောင်လာရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း လီက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့သည့် စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီနည်းပညာများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဘက်စလုံးအတွက်အကျိုးရလဒ်များအပြန်အလှန်ရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်းလီကဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Chinese clean energy company contributes to Brazil’s sustainable development
SAO PAULO, Oct. 17 (Xinhua) — The trend for renewable energy generation and use of such sources in Brazil is heading in the right direction towardsasustainable future, and Chinese solar batteries and electric vehicles manufacturer Build Your Dreams (BYD) is makingacontribution.
“We were the first to bring electric buses to Brazil when there was no suchaproduct in the country,” Li Tie, general manager of the Brazilian branch of BYD, told Xinhua inarecent interview while recalling the company’s early days in the country.
From the northeast cities of Recife and Salvador to Porto Alegre in the South, BYD brought electric buses imported from China and displayed them in major Brazilian cities, telling local bus operating companies that BYD’s electric buses were not “products from the future” but “available technologies.”
Over the past few years, BYD’s production lines of renewable energy products have expanded in Brazil step by step. It opened the first office in Sao Paulo in 2013; the assembly plants for electric buses and lithium iron ferrous phosphate batteries were established in Campinas, Sao Paulo state, in 2015; the electric bus chassis and solar panel factories were set up in Campinas in 2017; andabattery factory was established in Manaus, Amazon state, in 2018.
According to Li, electric chassis isacore technology of BYD and has major functions such as driving, gearing and braking. A chassis carries BYD’s innovative technologies in its batteries, controls and generators.
Brazilian government’s emphasis on the use of renewable energy has increased BYD’s confidence in and commitment to the market.
Li said, BYD was the first company promoting and leading the development of electric buses and solar power generation, and such technologies have been supported and encouraged by local government. BYD is also leading Brazil’s automobile industry towards hybrid and even pure electric mobility by offering batteries to electric vehicle manufacturers and energy storage companies.
BYD “brought 100 percent Chinese technology adapted to the Brazilian market, which was developed by both Chinese and Brazilian engineering,” said Marcello Von Schneider, institutional director of BYD Brazil, who believes that the exchange of knowledge and technology isavictory for Brazil to learn to use this technology.
Calling BYDa“sustainable solutions company,” the Brazilian executive said BYD wants to change “the concept of mobility in Brazil” and to bring modern and sustainable mobility with zero emission.
As one of the key markets for vehicles in the world, he believes Brazil is ready to be “a global player” in the transition to clean energy and sustainability.
“Brazil can beapioneer and leader in this process,” said Von Schneider. “Cities benefit from the non-emission of polluting gas with an electric bus.”